Cajiib raadinta cajiibka ah ee WordPress & filter - WPSOLR
Kudarro (Wareegyo, mawduucyo, muuqaalo)
laakiin Nacaybka raadintaada?
WAANU SOO QAADNAY
Marka waxaan u hibeynay nolosheena si aan u riixno xuduudaha sayniska raadinta si loogu farsameeyo baaritaanka ugufiican ee loo yaqaan aadanaha: WPSOLR
godka raadinta wordpress
Ka dhig raadintaada mid Super dhakhso badan oo Super caqli badan
50+ luqadood oo horay loo qaabeeyey
Waxqabadka aan la midka ahayn ee Elasticsearch, Solr, ama Algolia
WooCommerce, bbPress, WPML, Polylang, ACF PRO, toolset, yoast iyo inbadan
Dardar galiya shabakadaha aad jeceshahay: Elementor, Aragtida Qalabka
AI qoraallada iyo sawirrada
20 + demos dhammaan mawduucyada waaweyn
Ganacsiyada yaryar & waddamo badan
Kudar boqolaal astaamood raadintaada
Sug, ma ogtahay in seddex tiknoolajiyadood oo heer caalami ah ay ku badan yihiin raadinta?
- Algolia (Twitch, Dhexdhexaad, Caqli badan)
Iyada oo leh qalabkeena, waad wada isticmaali kartaa dhammaantood. Looma baahna inaad noqoto qof weyn si aad u hesho raadinta heer caalami ah mar dambe.
Qalabka raadinta WooCommerce
Qalabka raadinta WordPress
Qalabka raadinta Algolia
Qalabka raadinta Elasticsearch
SolR raadinta plugin
Qalabka Elementor raadinta
Shahaadada WPSOLR "WPML-Ready"
Qalab raadinta Polylang
bbPress raadin plugin
Yoast plugin plugin
All In One SEO raadinta plugin
Qalabka raadinta ACF
Qalabka raadinta Google Vision
Qalabka raadinta Luqadda Dabiiciga ah ee Google
Qalabka raadinta ee Amazon Rekognition
Amazon Fahamka plugin raadinta
Qalabka raadinta qalabka 'toolset'
AI Raadinta - Goor dhow imanaysa
AI / Neural / Barasho Qoto dheer / Raadinta Semantic
Su'aal & Jawaabo: Socdaalka Wadahadalka Google
Wadahadalka AI: RASA
Transformers-ka iyo gundhigga dulinka: BERT, GPT-3, Deg degText
Barashada qoto dheer, aka Artificial Intelligence, aka Neural Networks, waa meelwalba hada: laga soo bilaabo tarjumaada otomaatiga ah, ilaa jiilka qoraalka oo leh GPT-3.
Laakiin raadinta sidoo kale saameyn ayay ku yeelatay isbeddelkan. Jiil cusub oo loogu yeero maktabadaha ama adeegga "Raadinta dulinka" ayaa soo baxaya. Laakiin xiriiriyaha maqan ayaa ka maqan si looga dhigo kuwo si ballaaran loo qaatay: fudeyd iyo qiimo jaban.
WPSOLR waxay damacsan tahay inay noqoto xiriiriyahan maqan, iyadoo ukeeneysa astaamahaas aan caadiga aheyn WordPress iyo WooCommerce, sidii ay ugu sameysay Elasticsearch, Solr iyo Algolia.
Qaar ka mid ah raadinta neerfaha, isku ekaanshaha neerfaha, ilaha furan ama adeegyada la maareeyay, ee WPSOLR ay hadda baareyso:
Wajiga isku duuban
Dib-u-qiimeynta OpenAI (beta diyaar)
Mashiinka u dhigma Vertex
Qaar ka mid ah astaamaha aan jeclaan lahayn inaan u soo qaadno WordPress:
Moodooyinka Ugu Dambeeya: U adeegso dhammaan moodooyinka ku-saleysan-ku-saleysan ee ugu dambeeyay (tusaale ahaan, BERT, RoBERTa, MiniLM) si loo hubiyo tayada wax soo saar, hubinta tayada wax soo saarka, iyo dib u helidda dukumiintiyada.
Qaab-dhismeed: xulashooyin badan oo ku habboon xirmooyinka teknolojigaaga iyo kiiskaaga adeegsiga. Xulo kaydka xogta aad jeceshahay, beddelaha faylka, ama qaabka qaabaynta.
Furan: 100% la jaanqaadi kara xarunta moodeelka HuggingFace. Ku xir xirmooyinka qaab-dhismeedka kale (tusaale, Transformers, FARM, transformer xukunka)
Miisaanka: Miisaanka illaa malaayiin dukumiinti ah iyada oo loo marayo dib-u-soo-celinta, soo-saarka diyaarka ah ee dib-u-soo-celinta sida Elasticsearch / FAISS, Google wuxuu ku nuuxnuuxsaday algorithms-ka ANN, iyo macluumaadka ugu sarreeya ee Vector.
Dhamaad ilaa dhammaad: dhammaan aaladaha hal meel ku yaal: feyl beddelid, nadiifin, kala qaybsan, tababar, qiimayn, tixgelin, calaamadin, iwm
Developer saaxiibtinimo: waa fududahay in la saxo, la kordhiyo oo wax laga beddelo.
Lahabeyn karo: ku hagaaji sheybaaradaada boggaaga ama hirgeli DocumentStore-kaaga gaarka ah.
Barashada Joogtada ah: Ka ururi xogta tababarka cusub jawaabta isticmaale ee wax soo saarka iyo hagaajinta moodooyinkaaga
Waad ku mahadsantahay Saxiixaaga
Hesho wararkii ugu dambeeyay ee soo socda WPSOLR's raadinta AI
Fadlan sax meelaha (calaamadaha) la calaamadeeyay ee hoose.
1, run, 6, Email Lead, 2
1, run, 1, Magaca Kowaad, 2
1, run, 1, Magaca Dambe, 2
1, run, 9, Websaydhkaaga, 2
* Meelaha loo baahan yahay
Xusuusin: Waa masuuliyadeena inaan ilaalino arimahaaga gaarka ah waxaanan damaanad qaadaynaa in xogtaadu ay noqon doonto mid sir ah.
Talooyinka degdegga ah
Ku Shaqaynta Luqadaha Dabiiciga ah
Erayo isku mid ah oo firfircoon oo ka socda AI
Dib u tixraac
Dib-u-habeyn ku socota AI
Filters Widgets (slider, select2, color picker…)
Raadi dushaboorka falanqaynta
Iyo sababta oo ah raadintu waxay ubaahantahay xog dhab ah, horey ayaan usameynay xirayaasha ilaa fiilooyinka ugu badan ee la isticmaalo.
Si hagar la’aan ah ula shaqee WooCommerce, bbPress, ACF PRO, Muuqaallada Qalabka, WPML, Booliis, Yoast SEO, iyo qaar badan oo.
Waxaan sidoo kale kuu dhisi karnaa haddii loo baahdo.
U keen sax sax ah WooCommerce iyo waxyaabo kale oo dheeri ah
Fiidiyowga talo soo jeedinta qoraalka Algolia
Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa demo toos ah oo leh dulqaad-dulqaad iyo wajiyo >>
Waa maxay istuudiyaha 'Dev studio WPSOLR'?
Studio WPSOLR waa kooxda ka dambeysa WPSOLR, barnaamijkeena raadinta ugu muhiimsan ee WordPress & WooCommerce.
Studio-ga wuxuu soo bandhigayaa sanado khibrad horumarineed iyo qaabeyn loogu talagalay:
Ka iibso khabiirada WordPress iyo Search
Muxuu qabtaa istuudiyaha Dev WPSOLR ?
Qalabkayaga raadinta ee WPSOLR ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu dabacsan oo suuqa laga arki karo. Waxay ku habboontahay 99% macaamiisheenna.
Laakiin marmarka qaarkood, qofku wuxuu u baahan yahay xoogaa gacmo dheeri ah si uu u gaaro khibradda saxda ah.
Waan kaa caawin karnaa:
tayeeyo boggaaga oo dhan si aad u wanaajiso SEO iyo isbeddelka
Adeegso Elementor PRO, ACF PRO, iyo xoogaa PHP / JS / CSS si aad u dhisto wax kasta walxaha caadiga ah (CRM, aagga macaamiisha gaarka loo leeyahay, xubinnimada,…)
Samee UI Raadin & Shaandheeyeyaal cusub
Qor oo kuxiro Su'aalaha Caadiga ah
Dib u eegida waxqabadka
Ujeedka daahida leh qiimeynta heerka
Nala soo xiriir dhammaan shaqadaada caadada ah
Adeegso Kiis - Ka dhig raadinta MyListing inay ku duusho 1 milyan oo liis
Macaamiil kale oo MyListing ah ayaa noo yimid sababta oo ah boggiisa oo awoodi waayey inuu la qabsado liistada liiskiisa.
Kaliya maahan raadinta mid gaabis ah, laakiin sidoo kale bogga bogga iyo Yoast sitemaps.
Waxaan wax ka beddelnay ku darista MyListing-ga, oo hadda macaamiisha goobta ayaa duulaya, xitaa hal milyan ayaa liisaska ku jira.
Dardar MyListing iyo mawduucyo kale
Adeegso Kiis - Hagaaji saxnaanta natiijooyinka raadinta MyListing
Macmiil MyListing ah ayaa yimid Studio-keena maxaa yeelay ma uusan ka heli karin liisaska si sax ah oo ku filan: qaar ka mid ah meelaha gaarka loo leeyahay oo aan haba yaraatee la baarin.
Waxay ahayd inaan dhisno isku-darka buuxa, maxaa yeelay myListing ma adeegsaneyso raadinta raadin ee caadiga ah.
Iminka, oo ku darnaanshaha cusub, macaamiisheena soo booqda waxay raadin karaan macluumaad kasta oo laxiriira liiska.
Bixi saxnaan ka wanaagsan oo ku saabsan MyListing iyo mawduucyo kale
Adeegso Kiis - Ka soo saar 4,000 oo qoraal oo qoraal ah goob laga cunteeyo Faransiiska
Macaamiilku wuxuu qaatay 4,000 oo sawir oo ah alaabta dukaanka Raashinka.
Alaabooyinka waa laga soo dejiyey (waafajiyey) a Kezia II software diiwaanka lacagta, galay dukaanka WooCommerce “Magasin Bio à La Teste de Buch".
Sawirada ka dib waxaa lagu soo dhejiyaa maktabada warbaahinta.
Sidee qofku ula midoobi karaa sawirrada cinwaannada wax soo saarka, si markaa loogu dhejiyo sawirka saxda ah sawirada alaabta alaabada
By soo saarista qoraallada sawirka (OCR), adoo adeegsanaya WPSOLR kudar Google Vision API.
Kadibna by Tilmaamida Mages ee Elasticsearch iyaga oo wata qoraalladooda OCR.
Intaas kadib, furitaanka maktabada warbaahinta iyo raadinta "Wine Bordeaux 2019" waxay soo celineysaa sawirada u baahan in lagu lifaaqo sheyga la xiriira.
Ku raadi sawirrada Sirdoonka Artifishalka
Adeegso Kiis - darajo dhaqameed
Qof macmiil ah ayaa noo yimid maxaa yeelay wuxuu ogaaday in raadintiisa badanaa darajooyin hore oo darajooyin hore ah ay ahaayeen jagooyinka koowaad. Kaas oo aan ugu wanaagsanayn wargeys.
Dhanka kale, kala soocida taariikhda ayaa muujineysa jagooyin aan muhiim aheyn jagooyinka koowaad.
Sidaa daraadeed, waxaan dhisnay add-a cusub oo ku saleysan muuqaalka wasakh ee Elasticsearch. Muuqaalkaani wuxuu awood u siinayaa in lagu kala saaro natiijooyinka iyadoo loo eegayo labadooda sax ahaanshahooda iyo taariikhahooda. Xitaa si ka sii wanaagsan, saxda saamiga / taariikhda ayaa sifiican looga hakin karaa maamulka WPSOLR.
Natiijooyinka raadinta ku xir baahidaada
2020 wpsolr.com. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.